कुटनीतिमा वामपन्थी लफ्फाजी चल्दैन - हिमाल दैनिक
कुटनीतिमा वामपन्थी लफ्फाजी चल्दैन
तोते बालकले भाषा सिक्दा जस्तो हात्ती, हात्ती भने जस्तै लिपुलेक, सुस्ता, कालापानी, १९५० को सन्धीको पुनरावलोकन। अरे! पुनरावलोकन गर्न कसले रोकेको छ?
९ भाद्र २०७६, सोमबार १५:२७
नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदिप गिरिले वर्तमान नेकपा नेतृत्वको सरकार कुटनीतिक चातुर्यता देखाउन पूर्ण रुपले असफल भएको दाबी गरेका छन्।
प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै नेता गिििरले नेपाल र भारतबीच हालै सम्पन्न संयुक्त आयोगको बैठक निरर्थक र उपलब्धिहिन बनेको आरोप समेत लगाए।
उनले राजनीतिक नाराका रुपमा वामपन्थीहरुले लिपुलेक, कालापानी, सुस्ता र १९५० को सन्धी पुनरावलोकनको कुरा गरेपनि यसका विषयमा कुटनीतिक माध्यमबाट नेपालको हितमा हुने कदम चाल्ने भन्दा केबल वापन्थी लफ्फाजी मात्रै गरिरहेको आरोप पनि लगाए।
प्रदिप गिरिले सोमबारको संसदमा व्यक्त विचारः
पछिल्लो बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री माननीय प्रदिप ज्ञावालीजीले नेपाल÷भारत संयुक्त आयोगका बैठकका सिलसिलामा के कस्ता कुरा भए, के कस्तो उपलब्धि भयो भन्ने विषयमा हामीलाई जानकारी दिनु भयो।
त्यो जानकारी सुनेर, गद्गद् र मोहित भएर निस्किएपछि साँझपख मैले त्यसै आयोगका सिलसिलामा नेपाल सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रेसित र प्रशारित गरेको प्रेस विज्ञप्ति पनि पढ्न पाँए।
त्यी दुइटाको अध्ययन गर्दा म के निश्कर्षमा पुगेँ भनेः एक त माननीय मन्त्रीजीले यहाँहरुलाई सम्झना होला, कालापानी, लिपुलेक, सुस्ता, इत्यादीकाबारेमा कुरा उठायौँ भन्नु भएको छ।
१९५० को सन्धीको पुनरावलोकन गर्नका लागि दुबै देशका सचिवस्तरिय संयन्त्र पनि बनायौँ भन्नु भएको छ। यो रेकर्डमा होला। संयोगवस् वा नियतवस् परराष्ट्र मन्त्रालयले छापेको वक्तव्यमा त्यो छैन।
अब म त्यसमा ज्यादा टिप्पणी गर्न सक्दिन अहिले। मसँग समय थोरै छ। राप्रपाका एकमात्र सदस्य र अत्यन्त तेजस्वी सदस्य, कर्मठ सदस्यले हठात बिचमा केही दिनअघि परराष्ट्र समितिका क्रममा मैले बोलेका कुरालाई लिएर गम्भीर प्रश्न राख्नु भएको छ। मेरो समस्या के छ भने, मैले सिद्ध गर्नु पर्छ यस सदनमा यसपटकको त्यस संयुक्त आयोगको बैठक निरर्थक एक्सरसाइज वीथ फ्युटिलिटी भएको छ।
देश बदलिइसकेको छ। सरकार बदलिइसकेको छ। यहाँ दुई तिहाइको सरकार आएको छ। हिन्दुस्तानको त झन कुरै नगर्नुहोस्। दुई तिहाइको सरकारले मात्रै पुग्दैन धेरै विशेषण थप्नु परेको छ।
हामीसँग के छ? दुई वर्षको तोते बोलिले बल्ल भाषा सिक्दाखेरी उही शब्द बारम्बार सिक्नेक्रममा दोहोर्याउँछ। बाबु के भनेको रे भन्दा हात्ती, हात्ती भने जस्तै लिपुलेक, सुस्ता, कालापानी, १९५० को सन्धीको पुनरावलोकन। अरे पुनरावलोकन गर्न कसले रोकेको छ?
फेरि आयो कुरा, ठिक यस्तै बहसका सिलसिलामा म बाध्य भएर परराष्ट्र समितिको बैठक बसेका दिन कुटनीतिका सिद्धान्त, त्यो पनि कुनै ज्ञानका आधारमा होइन, टेक्स्टबुकमा पढेका आधारमा। विएमा तपाइले परराष्ट्र नीतिकाबारेमा किताब पढ्नु भयो भने, एमएमा पढ्नु भयो भने, हंस मोर्गेंथाउले लेखेको पोलिटिक्स एमोङ नेसन्स् भन्ने पुस्तक पाइन्छ।
परिक्षामा पाठ गर्नेक्रममा पनि पढ्नु भयो भने त्यसले एक, दुई, तीन, चार, पाँच कुटनीतिक सिद्धान्त गराउँछ। कुनै पनि राष्ट्रले आफ्ना कानूनी अधिकारलाई वास्तविक शक्ति सम्झिनु हुँदैन, सिद्धान्त नम्बर एक।
दोहोर्याएर सुन्नु होला। कुनै पनि राष्ट्रले आफ्ना कानूनी अधिकारलाई वास्तविक शक्ति सम्झिनु हुँदैन। युएनओमा सबैको एक भोट छ तर, चीन र भारतका अगाडि राजाका आगे बाउको दुहाई हुन्छ।
दोस्रो, भाषण गर्दा, बोल्दा, कालापानी दोहोर्याउँदा चुनावमा बढो ठिक हुन्छ। कालापानी लिनु परेको छ भने, कुटनीतिक अभ्यास गर्नु परेको छ। १९५० को सन्धी फर्काउनु परेको छ भने र सच्याउनु परेको छ भने, फेर्नु परेको छ भने, बोलेर हुँदैन।
बालककालदेखि नाराहरु सुनिराखेको छु। त्यहि नाराका सिलसिलालाई कोट्याउँदै मैले त्यहाँ प्रश्न गरेको थिएँ, ठूलो इरादा होला कसैको। भारतको होला, चीनको होला, अमेरिकाको होला। आज विश्व एउटा गाउँ भइसकेको छ ग्लोबल भिलेज भन्छौँ हामी। कसैले यस्तो इरादा राख्यो भने के गर्ने?
अब मलाई भन्नु थियो एउटा कुरा, विषय आदरणीय, माननीय, प्रखर शब्द अर्को राखिदिनु भयो।
अब मलाई सभामुखले कृपा गर्नु भयो भने, म यस विषयमा ज्यादा नभएपनि १५ मिनट लगाएर आफूले भनेको कुराको समर्थनमा तर्क यहाँ पेश गर्न सक्छु। मेरो प्रश्न थियो, विश्लेषण थिएन। जुन प्रकारले तपाई यो सरकार चलाउँदै हुनुहुन्छ, कुटनीतिको गलत समझदारी छ। यस्तै कुटनीतिलाई नबुझिकन तपाइले राजनीति र प्रचारसँग मिसाउनु भयो भने, नेपालको भाग्य पशुपतिनाथको हातमा छ।
तर, यस्ता प्रखर सांसदहरु आए भने युवा पीढीका कदाचित यस्ता प्रखर सांसदले पनि भोलि नेपालको भाग्यलाई आफ्नो हातमा लेलान्। तर, कुटनीतिक युद्ध गर्नु पर्ने हो न कि बलभद्र कुँबर र अमरसिंह थापाले बन्दुक बोकेर लगेको समय छैन।
दोस्रो, आज कुटनीतिक क्षेत्रमा जुन डिजिटल चेन्ज आएको छ, (डिजिटललाई के भन्छन् रे गगनजी) जुन एउटा प्रविधिमा अभूतपूर्व क्रान्ति भएको छ, त्यसको उपयोग हामीले गर्न जानेका छौँ? तपाइलाई सोध्दै छु म। आजको सबैभन्दा ठूलो माग छ कनेक्टीभिटी त्यो हामीले बुझेका छौँ? लफ्फाजी गरेर हुन्छ? एउटा शब्द छः लफाजी त्यसलाई भन्छन् वामपन्थी लफ्फाजी। त्यसको खण्डनका क्रममा मेरा मुखबाट त्यो शब्द निस्किएको हो।
Prevपछिल्लोउमेरै नपुगी बच्चा जन्माउनेको सङ्ख्या बढ्दो
अघिल्लोजी-७ बैठक विश्व अर्थतन्त्र र इरानी मुद्दामा अल्झियोNext